Jo Nesbø: gumi matipi kubva kumunyori akasimbiswa weNorway kune vanyori | Zvazvino Zvinyorwa
Jo Nesbø: gumi matipi kubva kumunyori akasimbiswa weNorway kune vanyori
Mufananidzo kubva kuK Magazine.
Munyori weNorway Jo Nesbø, tenzi weNordic mhosva inoverengeka, akapa mune ino bvunzurudzo a nhevedzano yemazano yevanyori. Musiki weakaongorora Harry hole uye zvakare kunakidza mabhuku evana kuverenga yako nzvimbo, nzira uye zvinokurudzira paanonyora nezvaanonyora nezvazvo. Matipi gumi ane chokwadi chekuuya anobatsira kune vanyori vekutanga. Uye pamwe isu vedu vatove neidzi tsika yekugovana navo. Ngatione.
1 1. Hapana mazuva anoshanda
2 2. Nyora chero kupi
3 3. Iva nehurongwa hwakakwana
4 4. Pinda mukusimba nenyaya
5 5. Shandisa hupenyu hwako
6 6. Nyora zvaunazvo, zvaunazvo
7 7. Rega zita riyerere roga
8 8. Basa rakanakisa rekusika harinzwe sekushanda.
9 9. Dock pfungwa
10 10. Nyora iwe pachako
1. Hapana mazuva anoshanda
Iko Nesbø kuverenga imwe basa dynamics iro rinowanzo siyana zvinoenderana nekuti uripi. «Nhasi ndamuka na4 mangwanani. Ndakaenda kumwe kunze kwehotera, ndikanwa kofi ndikashanda kusvika 8. Ipapo ndakaenda kujimu yehotera ndikazodya kudya kwemangwanani nemumiriri wangu. Ndichaita mabvunzurudzo kusvika na4 PM, ipapo ndichaenda kunhandare yendege ndodzokera kuOslo. Ndichashanda mundege, pamwe kwemaawa mashanu. Kunyora ndizvo zvandinoita kana ndisina zvimwe zvinhu zvekuita. Handina mitemo, uye ini ndinomuka zvichienderana nezvandakaita husiku hwapfuura.
2. Nyora chero kupi
«Ini ndinonyora kwese, asi nzvimbo dzakanakisa nendege nezvitima. Paunenge ugere muchitima kana kumirira ndege, unongova nenguva yakaganhurirwa yekunyora. Izvi zvinoita kuti unzwe kuti nguva yakakosha uye unofanirwa kuitisa mukana. Kana iwe ukamuka mangwanani uye woti uchazonyora kwemaawa gumi nemaviri, haunzwe. Ini ndinoda kuziva kuti ndiri kuzoita zvese zvandinogona mune chete 12 kana 1 maawa.
3. Iva nehurongwa hwakakwana
«Kana uine nyaya yakanaka kutanga nayo, zvinenge zvakanaka kunyangwe uchinyora sei.. Ini ndinoda kuve nechivimbo chekuti ndinoziva iyo nyaya, kuti pandinotanga kunyora, ndakazvishandisazve ndadzokorora. Saka ini handinzwe kunzwa, shure kwepeji rekutanga, kuti ndiri mutauri, murondedzeri. Nyaya yacho yatovepo, ini handisi kuigadzira sezvandinofamba. Ndipo paunonzwawo wakachengeteka kuudza vaverengi vako, "Huyai muswedere padhuze, nekuti ndine nyaya huru iyi. Saka ingo zorora uye vimba neni. Aya ndiwo manzwiro andinoita pandinoverenga mabasa evanyori vakuru.
4. Pinda mukusimba nenyaya
"Vanhu vemuAmerica ndivo vane ruzivo rwekutaura nyaya dzavo." Mumapeji ekutanga ebhuku vane nzira yakajeka yekuvawedzeredza. Itsika. John irving zvinoita, uye Frank Miller, graphic munyori wenhau ane nzira imwechete yekukumanikidza iwe kutendeudza mapeji. Ndinozvida izvozvo. Uye zvinogona kuve chero chinhu chinoita kuti vaverengi vako vade kuramba vachiverenga. Iwe haugone kufunga maererano nemitemo. Ingoshandisa iko kunzwa kwauinako muzvivindi zvako. Kana pfungwa yekutanga ichikunakidza uye ichinzwika sedambudziko, uri munzira kwayo".
5. Shandisa hupenyu hwako
«Izvo zvakanaka kutora pane chaiwo zviitiko zvehupenyu. Pandinonyora bhuku senge Vanotsvaga, Ini ndinoshandisa iyo nhema mhando asi ini ndinoshandisawo madingindira kubva kwandiri ega hupenyu. Ndakaita zvinhu zvakawanda zvakasiyana. Ini ndaive mukuru wemauto emuchadenga. Ndinoita mimhanzi. Ndakashanda semutengesi wemasheya kwemakore mazhinji. Aya ndiwo maitiro andakawana kurudziro Vanotsvaga. Pandaive muongorori wezvemari, avo vavhimi vetarenda vakandibvunzurudza. Chinondibatsira pamabhuku angu ndechekuti ndine hupenyu, saka, ndinogona kurondedzera nezvevamwe '.
6. Nyora zvaunazvo, zvaunazvo
«Izvo hazvisi zvekuyedza kunyora bhuku rinotengwa kwazvo, asi zvekunyora izvo zvaunazvo. Uye kana iwe uine rombo rakanaka, unogona kugovana rudo rwako rwekutaura nyaya nevateereri vakawanda. Ndakanga ndisingazive kuti nyaya dzangu dzaizosvika kune vaverengi vakawanda. Ini ndaifunga kuti vaive vazhinji kune vashoma. Saka ndakashamisika pandakaziva kuti ndaive nevanhu vakawanda pamba.
7. Rega zita riyerere roga
«Hapana mitemo kana zvasvika kune musoro wenyaya. Pfungwa dzinouya nenzira dzakasiyana. With Iye Snowman, novel iri rakatanga nemusoro wenyaya. Ndakafunga kuti yairira zvakanyanya kunge zita remusoro. Uye zvakazoitika kwandiri kuti zita iri rairevei maererano nenyaya. Uku ndiko kwaive kutanga. Mune zvimwe zviitiko, ndicho chinhu chekupedzisira chandinoita uye dzimwe nguva chinouya kwandiri kana ndiri pakati pebhuku. Sezvandareva, hapana mitemo. Vanotsvaga zvaive pachena nekuda kwechirevo chakapetwa. Yakauya kwandiri nekukurumidza.
8. Basa rakanakisa rekusika harinzwe sekushanda.
«Mabhuku angu ekunyora basa chinhu chandingaite mahara. Vamwe vevanyori vakanakisa kwete chete muNorway, asi kune dzimwe nyika, vaizove nemamwe mabasa kunze kwekunyora. Asi kune vazhinji, kushanda ndicho chikamu chakanakisa chezuva kana ivo vachiita izvo zvavanonyatsoda kuita.
9. Dock pfungwa
«Ko kana ndikaba mamwe mabhuku? Chokwadi. Uye kana ndiri mbavha, ndinogona kukuudza kuti ndiri kuba asi handikwanise kukuudza kubva kunaani. Zvakanaka, a Maka Twain Tom Sawyer naHuckleberry Finn. Iwo aive makuru mabhuku uye mavara. Kwandiri kunyora maitiro ekuverenga. Iyo imwecheteyo reflex yaunayo kana iwe uri patafura neshamwari. Mumwe munhu achataura imwe nyaya, mumwezve ozotaura imwe, yozotevera. Saka iwe unofanirwa kutaurira chimwe chinhu chitsva futi. Ndakakurira mumusha mandaive nezviitiko zvakanaka zvese semuteereri uye semuverengi.. Ino ndiyo nguva yangu ".
10. Nyora iwe pachako
«Pandiri kunyora, ndiri kufungidzira muverengi mumwe, pachangu. Kwandiri, kunyora hakusi kwekushanyira vanhu, kuri kukoka vanhu kwaunenge uri. Uye zvinoreva kuti iwe unofanirwa kuziva kuti iri kupi. Paunosvika pamharadzano, kana iwe ukafunga nezvekuti muverengi angade kuti uende kupi, unobva warasika. Unofanira kuzvibvunza kuti chii chingaite kuti ude kumuka mangwana upedze nyaya iyoyo. Dzimwe nguva nyaya yacho inonongedza iko kunongedzera, asi chokwadika, ndiwe iwe semunyori anosarudza. Nekudaro, dzimwe nguva iro iro iro bhuku pacharo rinogona kukutungamira, iro rinorarama riri roga.
Kwayaka: Iyo inodzungaira foxy
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Jo Nesbø: gumi matipi kubva kumunyori akasimbiswa weNorway kune vanyori
Nhoroondo yeOctavio Paz